Technicolor PostWorks 'Ben Murray na-edu otu Panel na Nkesa na DOC NYC - NAB Gosi Akụkọ site na Mgbasa Mgbasa. Onye mgbasa ozi mgbasa ozi nke NAB Show, Onye NAB gosiri LIVE
Home » News » Technicolor PostWorks 'Ben Murray na-edu otu Panel na Nkesa na DOC NYC
Technicolor PostWorks 'Ben Murray na-edu otu Panel na Nkesa na DOC NYC
NEW YORK - Technicolor PostWorks Onye isi oche nke Creative Services Ben Murray ga-eji nwayọọ nwayọọ kwurịta okwu banyere ịkwadebe ihe nkiri maka nkesa n'izu izu DOC NYC PRO, nke a na-eme na ememme ngosi DOC NYC. John Campbell, onye otu onye isi na onyeisi ụlọ ọrụ na Buffalo 8, ga-eso Murray; onye na-emepụta ihe / Director Blair Foster nke Jigsaw Productions, na filmmaker Alysa Nahmias, onye nchoputa Ajna Films. Akpọrọ aha Ntụle ọmụmụ: Kwadebe ihe nkiri gị maka nkesa, a na-eme ndokwa maka Tuesday, November 13 na 3: 45 pm na IFC Center.
Site n'ịbawanye nke ọrụ ndị gụgharịrị na ntanetị weebụ, ndị na-egwu fim taa nwere nhọrọ karịa mgbe ọ bụla maka ikesa ihe nkiri ha, ma ndị na-adịghị eme atụmatụ nke ọma nwere ike ịme ihe dị oke ego ma ọ bụ ghara ịrụpụta ihe kacha mma. "Ogige ahụ ga-enye ndụmọdụ ọ bụghị naanị na nkwado maka teknụzụ, kama na ọrụ nile nke na-aga ịse ihe nkiri," ka Murray na-ekwu. "Nke ahụ gụnyere agụmakwụkwọ, ahịhịa mgbọrọgwụ na-akpa nkata ma na-arụ ọrụ na ndị nkesa iji nweta okwu ahụ."
Ndị so na:
John Campbell bụ onye guzobere JCINTIME, LLC, ụlọ ọrụ na-arụpụta ihe na ụlọ ọrụ, yana onye ọrụ na onyeisi ụlọ ọrụ na Buffalo 8, ụlọ ọrụ BondIt Media na ụlọ ọrụ mgbasa ozi zuru oke na mmepe, mmepụta, ọrụ mmepụta na ọrụ nlekọta ndị ahịa. Ọ na-ejikwa ihe nkiri na ndị nduzi telivishọn, ndị edemede na ndị na-eme ihe nkiri. Onu ogugu ya dika onye na emeputa ihe gunyere Nwa-nwoke, Nwa-nwanyi, Nrọ, Akpọrọ na akwukwo nso Ọdịnihu mara mma. Ọ mepụtara 2018 March na Washington Film Festival.
Blair Nye merie Emmy Awards abụọ maka ọrụ ya na Academy Awardihe nkiri Azụ ụgbọala na-ekpuchi Ọchịchịrị nakwa Emmy maka Martin Scorsese's George Harrison: Ibi na World Material. Na 2017, ọ na-eduzi na mepụtara, tinyere Alex Gibney, Rolling Nkume: Akụkọ si Edge maka HBO. Ọ mepụtara akwụkwọ akụkọ Netflix Mee m Roger Nkume nke premiered na 2017 Tribeca Nkiri Ememme. Ihe ndị ọzọ na-agụnye Sinatra: Ihe niile ma ọ bụ ihe ọ bụla, Maazi Dynamite: Nbilitee nke James Brown, The History of Eagles, Ihe Nzuzo Nzuzo: Akụkọ nke Wikileaks na Park Avenue: Ego, Ike na American Dream.
Alysa Nahmias bụ ihe mmeri filmmaker onye nkuzi mbụ nkuzi ya, Ebe ndị a na-emechabeghị (ya na Ben Murray), weere onyinye onyinye mmụọ nke ANNNX, ma dị na nchịkọta na-adịgide adịgide nke Museum nke Modern Art, New York. Dị ka onye na-emepụta ihe, ihe ndị o nwetara gụnyere Ọgba aghara, Enweghị Ìhè na Mba Ọ Bụla N'ebe ọ bụla, Ehihie nke ụda: Tanaquil Le Clerq na Ọta na Ụgha. E gosipụtara ọrụ ya n'oge ememe na ihe ngosi n'ụwa nile, gụnyere Sundance, Berlinale, SXSW, HotDocs, Sheffield Doc / Fest, CPH: DOX, na Ụlọ Nkiri Society nke Lincoln Center's Sound + Vision, ma wepụ ya na US na UK.
Ben Murray bụ onye isi oche, Creative Services na Technicolor PostWorks NY. Ndị ahịa ya mgbe niile gụnyere Ken Burns, Alex Gibney, Michael Moore na Martin Scorsese. Akụkụ ya na-eduzi mmalite, Ebe ndị a na-emechabeghị, merie 2012 Independent Spirit Award ma kpuchie na ememe na asọmpi n'ụwa nile. O hiwere Ụlọ Ụlọ, ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi nke na-esonyere Deluxe na Technicolor tupu Technicolor PostWorks nwetara ya na 2012. Ọ na-edebe BFA na Nkiri TV na Television site na Ụlọ Akwụkwọ Tisch nke Tisch University nke New York, bụ onye nyocha MBA ugbu a na Wharton School, University of Pennsylvania.
Onye na-akwado ihe nkiri na ndị na-ahụ maka onwe ha, Technicolor PostWorks nyere ọrụ mgbasa ozi maka fim anọ na-egosi na ememme ngosi DOC NYC a. Ha gụnyere:
Ihe O kwuru: Art nke Pauline Kael (nchịkọta isiokwu, nhazi ụcha na nnapụta).
Amụma ahụ (nchịkọta isiokwu, nhazi ụcha na nnapụta).
Mpụ + Ahụhụ (nchịkọta isiokwu, nhazi ụcha na nnapụta).
Breslin na Hamill: Ndị Artists nke Emechacha (nchịkọta isiokwu, nhazi ụcha na nnapụta).
Technicolor PostWorks New York bụ East Coast kasị saa mbara digital emegharị na post-mmepụta eweta, ọrụ ahụkebe otu nke okike nka, injinia na oru ngo oru ijere anyị ahịa site na fim ahụ na TV finishing usoro.
Technicolor PostWorks New York-enye onye zuru iyi nke ọ bụla post chọrọ, gụnyere in-ekwu digital dailies, film Onyonyo na mweghachi, collaborative-abụghị linear isiokwu na HD/ UHD agbasa ozi n'ikuku finishing, 4K digital sinima, zuru ụwa ọnụ content lifecycle support, na mbara film na TV ụda ọrụ itoolu mix nkebi.
Maka ozi ọzọ, gaa na www.technicolorpwny.com
Broadcast Engineer Broadcast Engineering CES2017 nkesa doc nyc akụkọ nọọrọ onwe ha film post mmepụta SoftAtHome, MStar, CES2017 Ụgha & Akụrụ TV Technology Ultra HD Forum video Engineer	2018-11-08
Previous: Njikọ Mgbasa Ozi Na-asụ Asụsụ Japanese Asụsụ nke ProMD Enhanced Management Software
Osote: Calvary Chapel Modesto Na-ebugharị Ụlọ Nchịkwa, Nwelite na Broadcast Pix BPswitch Integrated Production Switcher
Hey Buddy !, Achọpụtara m ozi a maka gị: "Technicolor PostWorks 'Ben Murray ka ọ duru otu Panel na Nkesa na DOC NYC". Nke a bụ njikọ weebụsaịtị: https://www.broadcastbeat.com/technicolor-postworks-ben-murray-to-lead-a-panel-on-distribution-at-doc-nyc/. Daalụ.